Gaalkacyo: Ing. Cumar dheere oo xilal kala duwan hayay ayaa goor dhawayd lagu dilay Gaalkacyo
Waxaa goordhawayd Salaadii marqib ka dib magaalada Gaalkacyo toogasho lagu dilay Alle ha u naxariistee Eng. Cumar Cabdulle Oo aad loogu garan ogaa Eng. Cumar dheere, waxaana la dilay xilli uu salaaddii maqribka kasoo baxay.
Dabley hubaysan ayaa Injineerka ku dishay bannaanka masaajidka Salaama ee xaafadda ee wadajir, waxaana islamarkiiba goobta ka baxsaday raggii dilka haystay oo ku hubaysnaa bistoolado.
Alle ha u naxariistee Eng. Cumar dheere waxaa uu isku hayey masuuliyado kala duwan waxaana ka mid ahaa, Guddoomiyaha Guddiga ganacsatada ee gobolka mudug, Guddoomiyaha guddiga dhismaha wadada wadaagsin, guddoomiye ku xigeenka guddiga sanduukha horumarinta gobolka Mudug, iyo xubin ka mid ah masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Somtel ee gobolka mudug.
Dhagaxa isbitaalka magaalada Gaalkacyo ayuu hadda saaran yahay, mana jirto cid loo hayo dilkiisa, waxaana aad loogu xusuusaa inuu ahaa nin khayrka jecel oo ka qayb qaadan jiray shaqooyinka waacinaadda ah.